Warningdọ aka ná ntị njem maka Lebanọn: UAE, Saudi Arabia, USA n'etiti mba ndị ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Warningdọ aka ná ntị njem maka Lebanọn: UAE, Saudi Arabia, USA n'etiti mba ndị ọzọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lebanon • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Saudi Arabia na United Arab Emirates so na mba ndị na-adọ ụmụ amaala ha aka na ntị ugbu a ịga Lebanọn. Ọ bụ ụlọ ọrụ Saudi Press Agency (SPA) kwuru ka a gafere njem Saudi. Ndị Ozi Ala Ọzọ nke Alaeze ahụ dụrụ ndị Saudis nọ na Lebanọn ọdụ ka ha kpachara anya ma kpọtụrụ ndị nnọchi anya gọọmentị nke Alaeze ahụ na Beirut maka enyemaka ọ bụla.
Ndị ọrụ na-ahụ maka njem nleta na Lebanon rue ugbu a na-eleghara okwu a anya ma ọ nweghị ihe ngosi na weebụsaịtị ha banyere nsogbu maka ndị njem nleta. Nke a bụ akụkọ ọjọọ maka njem na njem njem na-arụsi ọrụ ike na mbọ ịmaliteghachi njem nlegharị anya na mba 2 izu tupu WTM.
Warningdọ aka na ntị njem a site na mịnịsta mba ofesi nke Saudi Arabia na-abịa ka ngagharị iwe ndị Lebanọn banyere n’ụbọchị nke abụọ ya na ndị ngagharị iwe na-akpọ oku iwepụ ndị isi ha boro ebubo na ha bukọrọ akụ na ụba.
United States nwere Lebanọn na nkewa nke atọ nke pụtara “chee echiche maka njem” sị:
Chegharịa njem Lebanọn n'ihi mpụ, iyi ọha egwu, ịtọrọ mmadụ, na agha agha. Fọdụ ebe enweela ihe egwu. Gụọ ihe niile Advisory Travel.
Emela njem gaa:
ókè-ala na Syria ruru ka iyi ọha egwu na agha agha
ókè-ala na Israel n'ihi nwere maka agha agha
gbara ọsọ ndụ biri n'ihi nwere maka agha agha
Citizensmụ amaala US kwesịrị ịtụgharị uche ma ọ bụ zere njem gaa mpaghara ụfọdụ na Lebanọn n'ihi egwu nke iyi ọha egwu, ọgụ ọgụ, ịtọrọ mmadụ, na ntiwapụ nke ime ihe ike, ọkachasị nso mba Lebanon na Syria na Israel. Citizensmụ amaala US bi na ịrụ ọrụ na Lebanon kwesịrị ịma ihe egwu dị na ịnọdụ na mba ahụ ma jiri nlezianya tụlee ihe egwu ndị ahụ.
Citizensmụ amaala US ndị kpebiri ịga Lebanọn kwesịrị ịma na ndị ọrụ nnọchi anya gọọmentị nke US ọ bụghị mgbe niile ka ha nwere ike ịga nyere ha aka. Ngalaba na-ahụ maka egwu na ndị ọrụ gọọmentị US na Beirut dị oke njọ iji chọọ ka ha biri ma rụọ ọrụ n'okpuru mmachi nchebe siri ike. Enwere ike imezi atumatu nchekwa nke US Embassy n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa ọkwa.
Groupstù ndị na-eyi ọha egwu na-aga n'ihu na-akpa nkata ịwakpo na Lebanọn. Enwere ike ịnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ na Lebanọn n'ihi mwakpo na ogbunigwe nke ndị otu na-eyi ọha egwu mere. Ndị na-eyi ọha egwu nwere ike ịwakpo ọgụ na obere ma ọ bụ enweghị ịdọ aka ná ntị na-elekwasị anya na ebe ndị njem nleta, ogige njem, ahịa / ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ gọọmentị mpaghara.
Gọọmentị Lebanọn enweghị ike ịkwado nchedo ụmụ amaala US megide ntiwapụ mberede nke ime ihe ike. Ezinụlọ, agbata obi, ma ọ bụ esemokwu ịrọ mmụọ nwere ike ịrị elu ngwa ngwa ma duga n'ọgba egbe ma ọ bụ ime ihe ike ndị ọzọ na enweghị ịdọ aka na ntị. Ọgba aghara emeela n'akụkụ oke ala Lebanọn, na Beirut, na n'obodo mgbaba. E webatala ndị agha Lebanọn iji kwụsị ime ihe ike na ọnọdụ ndị a.
Ngosipụta ọha na eze nwere ike ime na obere ịdọ aka ná ntị ma nwee ike ime ihe ike. Kwesịrị izere ebe a ga-eme ngagharị ma kpachara anya n’ebe ọ bụla a na-eme mgbakọ. Ndị ngagharị iwe agbachila nnukwu okporo ụzọ iji kpọsaa ọha na eze maka ihe kpatara ha, gụnyere ụzọ bụ isi e si aga na Embasii US, yana ụzọ bụ isi n'etiti Beirut na ọdụ ụgbọ elu mba Rafiq Hariri. Maybanye n'ọdụ ụgbọ elu nwere ike ịkwụsị ma ọ bụrụ na ọnọdụ nchekwa na-akawanye njọ.
Kidtọrọ mmadụ, ma ọ bụ maka mgbapụta, ebumnobi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ esemokwu ezinụlọ, ewerewo ọnọdụ na Lebanọn. Ndị a na-enyo enyo na ịtọrọ mmadụ nwere ike inwe njikọ n'etiti ndị na-eyi ọha egwu ma ọ bụ òtù ndị omekome.
Enwere ike ịchọta mmelite ndị ọzọ na Lebanon https://www.eturbonews.com/world-news/lebanon-news/
Lebanon Saudi Arabia. ( ịdọ aka ná ntị njem UAE